Laba Barnaamij oo Waajibka ah inay leeyihiin Twitter si loogu maareeyo kuwa raacsan | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 21, 2014 Khamiis, Agoosto 21, 2014 Douglas Karr
Jaceylkeygii aan la lahaa Twitter wuxuu umuuqdaa mid dib loo shiday goor dambe. Waxay ila tahay in kooxda at Twitter ay si aad ah uga jawaab celisay sidii looga saari lahaa spamers-ka iyo akoonnada xunxun nidaamka iyo tayada quudintayda twitter-ka way ka sii fiicnaanaysaa oo ka sii fiicnaanaysaa. Run ahaantii si daacadnimo ah, inta aan haysanay kuwa fiican - 30k + on @douglaskarr iyo 50k + on @abdihakin_abdi, Kama aanan shaqeyn inaan kordhiyo bulshadaas maxaa yeelay dhawaqa ayaa ahaa mid dhago iyo wax aan fiicnayn. Inta badan, waxaan u wareejiyay sheekooyinka shabakadaha kale ee bulshada.
Haddii aad ha helin Twitter, waxaan jecelahay in aan ka fikiro sida guddiga bulshada oo aan ku xidhi karo isla markaana kula sheekaysan karo dadka fariimaha soo dira. Si ka duwan barnaamijyada kale ee bulshada ee aan ku yeelan karo wadahadal dheer, Twitter waa barxad weyn oo lagu ogaanayo talooyin iyo nuxur wanaagsan, iyo in lala xiriiro dadka kale ee warshadaha sida aniga oo kale ah.
Hubso inaad Nagala Socoto Twitter
Raac @martech_zone Raac @douglaskarr Raac @dknewmedia Raac @jlisak
Hadda shabakadahaas kale ee bulshada waxaa ku xayiran xayeysiin iyo SPAM. Waxay umuuqataa cusbooneysiin kasta oo kale oo aan aqriyo inaysan khusaynin sidaa darteed waxaan waqti yar ku luminayaa halkaas iyo inbadan oo Twitter ah. Markii aan dib u soo nooleeyay kaqeyb qaadashadaydii taageerayaasha ee Twitterka waxaanan raadinayaa inaan hagaajiyo bulshada iyo wada hadalka labadaba, waxaa jira laba codsi oo kala duwan oo aanan ku noolaan karin la'aanteed.
Xannibi Xisaabaadka Been Abuurka ah ee Twitter ee leh StatusPeople
Waxaad layaabi kartaa waxa loogu yeero saameynta waxaad raacdaa iyo tobanaan kun oo akoonno been abuur ah oo sameeya kuwa soo socda. Nidaamyada dhibcaha saamaynta badankood tixgelin kama siinayaan waxyaabaha soo socda, markaa waxaad raaci kartaa dadka aan run ahaantii saamayn badan lahayn sida ay tirooyinku tilmaamayaan.
Ka takhalusida naftaada kuwa raacsan been abuurka ah waxay ka dhigeysaa khibrad aad u xoogan Twitter-ka shaqsi ahaan waxayna sidoo kale ka caawineysaa gebi ahaanba tirtirista akoonadan xun ee Twitter-ka. In badan oo aan dhammaanteen xannibno xisaabaadka, ayaa ka sii fiicnaanaya shabakadda! Sababtaas awgeed, waan jeclahay xaaladdayda Shakhsiyadeed App -ka been abuurka ah. Waxaan u isticmaali jiray inaan ka takhaluso xisaabteyda twitter-ka shaqsiyadeed ee been-abuurka haddana waxaan bilaabay nadiifinta tirada dadka raacsan ee ku jira koontadayada koontada!
Raadi kuwa raacsan oo Weyn oo kuwa xun uga tag JustUnfollow
Ma ogtahay inay jiraan kooxo badan oo ka mid ah barnaamijyada Twitter ee halkaa ku soo raaci doona si ay u eegaan haddii aad gadaal ka raacdo… ka dibna way ku ridi doonaan maalmo yar ka dib? Waa istiraatiijiyad khiyaano ah oo ka caawisa isticmaaleyaasha Twitter kobcinta waxyaabaha soo socda iyo kordhinta saamiga kuwa raacsan inay raacaan. Justunfollow waxay kaa caawineysaa inaad hesho oo aad kala baxdo xisaabaadka Twitter-ka ee leh aan fiicneyn adiga.
Waxaan joogaa Twitter-ka si aan u arko wararka ka imanaya dadka warshadayda ku dhex jira oo aan ula macaamilo Hal dariiqo oo weyn oo lagu helo akoonnada cusub ee xiisaha leh ee Twitter waa iyadoo la adeegsanayo JustunfollowNuqul raacaha nuqulkiisa. Waan arki karaa dadka raacsan hoggaamiyeyaasha warshadaha ka dibna adeegsanaya Justunfollow si aan ula socdo koontadayda. Tani waa hab fiican oo lagu dhisi karo bulshadaada kuwa raacsan!
Maskaxda ku hay, labadan aaladood, waa inaad raacdaa oo aad ka baxdaa adigoo midba mar gujinaya. Tani way ku xumaan kartaa laakiin ma ahan qaladka madasha. Twitter-ka ayaa amar ku siiyay in barnaamijyadaas aysan yeelan karin waxqabadyo badan oo soo socda iyo dabagal la'aan. Waxaa sidoo kale jira maalinle ah Twitter API xaddido inaad sidoo kale gaari karto
Tags: kuwa raacsan been-abuurkahel xisaabaadka twitter-kasida looga hortago dadka raacsan been abuurkasida loo helo kuwa raacsan oo been abuur ahsida loo helo kuwa raacsan twitter-kajustunfollowmaamul kuwa raacsan twitter-kawaa inuu leeyahay barnaamijyodadka deegaankaTwitterbarnaamijyada twittertwitter kuwa raaca been abuurtaageerayaasha twitter
Oktoobar 4, 2016 at 12:01 AM
Haye! Waxaad heshay maqaal fiican oo waxtar weyn noo leh gaar ahaan kuwa ku firfircoon warbaahinta bulshada.
Kuwani dhammaantood waa qalab weyn oo kaa caawinaya kobcinta kuwa raacsan bartaada twitter-ka! Adeegso qalabka otomaatiga. Waxay kaa badbaadin doonaan waqti aan tiro lahayn. Sidoo kale ka dhig tweets-kaaga inay u muuqdaan sidii aad dhab ahaan u qortay. Si kale haddii loo dhigo iskuday inaadan dhaafin tifaftirka illaa aad u maleyneyso in dhagaystayaashaadu ay si dhab ah u xiiseynayaan macluumaadka aad tweet gareyso.